अन्तरवार्ता Archives - RoadMapNews
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपरेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनमा दिए । उनीसँग उपलब्ध ४१ सांसदको वहुमत देखाएर उनले पुनः बहुमतको मुख्यमन्त्री हुन खोज्दा दाङकी प्रदेशसभा स...
०तपाईंले उदयपुर सिमेन्टमा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेको महिना दिन ब्यतित भयो । यस अवधिमा उदयपुर सिमेन्टलाई कसरी नियाल्नुभयो ? कारखानाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको कच्चा पदार्थ हो । कच्चा पदा...
हाम्रो नारा भनेको कृषिलाई जोड्ने, अरुलाई नछोड्ने भन्ने हो
कृषि विकास बैंकले २४ अर्बको कृषि बोण्ड निष्काशन गर्ने परिकल्पना सहित अहिले पहिलो चरणमा ६ अर्बको बोण्ड जारी गर्दैछ, यसले बैंकको व्यवसाय, सेयरधनीको प्रतिफल, ऋणको ब्याजदर र किसानलाई ऋणमा सहजतामा कस्तो प्...
० पछिल्लो समयमा निजामती कर्मचारीलाई हेर्ने आम जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक देखिन्छ । निजामती सेवाको शाख राख्दै जनविश्वास हासिल गर्न तपाईँसँग के छ योजना ? निजामती प्रशासन राज्यका नीति नियमलाई लागू गर्ने...
० अहिलेको राजनैतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? अहिले कोरोनाले मुलुक आक्रान्त छ । यसले समाजमा ठुलै संकट ल्याएको छ । यसको आर्थिक सामाजिक अशर गहिरिदै गएको छ । यस सँगै राजनैतिक दलहरुले अर्को राजनैति...
कुनैपनि सेयरको मूल्य निश्चित विन्दुसम्म मात्रै बढ्ने हो
० तपाईं सेबोनको अध्यक्ष भएपछि नेपालको पूँजीबजार विकासमा खास के काम भए ? र अब के गर्दै हुनुहन्छ ? पूँजीबजारका क्षेत्रमा सुधारका कामहरु नभएका होईनन, धेरै भएका छन् । तर हामी जुन गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने ह...
बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना अर्थात् जनगणना २०७८ को तयारी के कसरी भई रहेको छ ? नेपालमा जनगणना लिने प्रचलन आजभन्दा १०९ वर्ष पहिले बि.सं. १९६८ सालबाट सुरु भएको हो । प्रत्येक दश दश वर्षमा जनगणना हुँदै आएको ...
मलाई कसैको आशा छैन
पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा प्रदीप नेपालको खोजी हुन थालेको छ । नेकपाभित्र आन्तरिक विग्रह चर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सल्लाकार समूहका सबै सदस्य उहाँको गोठाटारस्थित निवास...
प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा मोरङ जिल्लाबाट नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई पराजित गरेका लालबाबु पण्डित पहिलोपटक सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा डिभी र पिआरधारी कर्मचारीमाथि निर्मम कारवाहीका कारण निकै ...